Zoledronic Acid (ဇိုလီဒိုနစ် အက်စစ်) : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Zoledronic Acid (ဇိုလီဒိုနစ် အက်စစ်)
Zoledronic Acid (ဇိုလီဒိုနစ် အက်စစ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Zoledronic Acid ကို Paget’s disease အား ကုသရန် သုံးသည်။ အရိုးပျော့ခြင်း၊ ကြွပ်ခြင်းကို ကုသရန် သုံးသည်။ အခြား အကြောင်းရင်းများအတွက် လည်း သုံးနိုင်သည်။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Zoledronic Acid (ဇိုလီဒိုနစ် အက်စစ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဤဆေးကို ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း သုံးပါ။ ပေးထားသော အချက်အလက် အားလုံးကို ဖတ်ရှုပါ။ လမ်းညွှန်ချက် အားလုံးကို သေချာလိုက်နာပါ။
၎င်းကို သွေးပြန်ကြောထဲသို့ အချိန်တစ်ခုကြာ ထိုးသွင်း ရသည်။ ဆရာဝန်က အရည် နည်းနည်းသောက်ရန် မပြောပါက caffeine မပါသော အရည်များကို များများသောက်ပါ။
အဖျားတက်ခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း လျော့ကျအောင် acetaminophen ပေးနိုင်သည်။
Zoledronic Acid မထိုးမီ နာရီအနည်းငယ် အလိုတွင် အနည်းဆုံး အရည် နှစ်ဖန်ခွက်လောက် သောက်ပါ။
Zoledronic Acid (ဇိုလီဒိုနစ် အက်စစ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Zoledronic Acid ကို အိမ်တွင် သိမ်းဆည်းရန် လိုအပ်ပါက ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲကို ဆရာဝန်၊ သူနာပြု သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူ နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Zoledronic Acid (ဇိုလီဒိုနစ် အက်စစ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင်သည် Zoledronic Acid သို့မဟုတ် အခြားဆေးများ၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ပါက။
ကယ်စီယမ် ပမာဏ နည်းပါက
ကျောက်ကပ် ရောဂါ ရှိပါက
ဤဆေးကဲ့သို့ အခြားဆေး သုံးနေပါက သို့မဟုတ် သုံးတော့မည် ဆိုပါက
တူညီသော ဆေးပါသော အခြားဆေး သုံးနေပါက
ကိုယ်ဝန်ရှိပါက သို့မဟုတ် ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်ပါက။ ကိုယ်ဝန် ရှိပါက ဤဆေးကို မသောက်ပါနှင့်။
ကလေးနို့တိုက်နေပါက။ ကလေးနို့တိုက်ရန် စီစဉ်ထားပါက
သင်သည် Zoledronic Acid သုံးနေကြောင်းကို ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးသူအားလုံးကို ပြောပြပါ။ ၎င်းတွင် ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများ၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူများနှင့် သွားဆရာဝန်များ ပါဝင်သည်။
ဤဆေးကဲ့သို့ ဆေးများ သုံးနေသူများတွင် ပန်းနာရင်ကြပ် ပိုဆိုးနိုင်သည်။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဤဆေးသည် အရိုးကျိုးနိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဆရာဝန် ပြောသည့်အတိုင်း သွေးစစ်ဆေးပါ။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဆရာဝန် ပြောသည့်အတိုင်း အရိုး သိပ်သည်းဆကို စစ်ဆေးပါ။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဆရာဝန် ပြောသည့်အတိုင်း ကယ်စီယမ် နှင့် ဗီတာမင် ဒီ သောက်ပါ။
ဤဆေးကို စတင်မသုံးမီ သွားစစ်ဆေးမှု ခံယူပါ။
သွားများကို သေချာ ဂရုစိုက်ပါ။ သွားဆရာဝန်နှင့် မကြာခဏ ပြသပါ။
ဤဆေးကို ကယ်စီယမ်/ ဗီတာမင် ဒီ နှင့် အလေးချိန် သယ်ဆောင်ရသော လေ့ကျင့်ခန်းများ ဥပမာ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ PT ( ခန္ဓါကိုယ် ကုထုံး) နှင့်အတူ သုံးပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဆရာဝန် ပြောသော စားသောက်ပုံနှင့် လေ့ကျင့်ခန်း အစီအစဉ်ကို လိုက်နာပါ။
ကလေးများကို မပေးပါနှင့်။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
သင်သည် အသက် ၆၅ နှင့်အထက် ဖြစ်ပါက zoledronic acid ကို သတိဖြင့် သုံးပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ပိုဖြစ်နိုင်သည်။
ဤဆေး သုံးနေစဉ် ကိုယ်ဝန်တားရန် သင်ယုံကြည်သော ကိုယ်ဝန်တားဆေးကို သုံးပါ။
သင်သည် ကိုယ်ဝန်ရှိနေစဉ် ဤဆေးကို သုံးပါက မမွေးသေးသော ကလေးငယ် အပေါ် အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သည်။ zoledronic acid သုံးနေစဉ် ကိုယ်ဝန်ရှိပါက သို့မဟုတ် ကိုယ်ဝန်ရလာပါက ဆရာဝန်အား ချက်ချင်းခေါ်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Zoledronic Acid (ဇိုလီဒိုနစ် အက်စစ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သို့မဟုတ် နို့တိုက်စဉ်တွင် Zoledronic Acid သုံးလျှင်ရနိုင်သော အန္တရာယ်များကို ပြည့်စုံစွာ လေ့လာထားခြင်း မရှိပါ။ Zoledronic Acid မသောက်မီ ဖြစ်နိုင်သော အကျိုး ကျေးဇူးနှင့် အန္တရာယ်ကို ချိန်ညှိရန် ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ပါ။ Zoledronic Acid သည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အစားအသောက် နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက် အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် D ရှိသည်။
Zoledronic Acid (ဇိုလီဒိုနစ် အက်စစ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ကယ်စီယမ် နည်းခြင်း၏ လက္ခဏာများ။ ဥပမာ ကြွက်တက်ခြင်း၊ အကြောဆွဲခြင်း၊ ထုံကျဉ်ခြင်း၊ တရွရွ ခံစားရခြင်း၊ တက်ခြင်း
ကျောက်ကပ် ပြဿနာ၏ လက္ခဏာများ။ ဥပမာ ဆီးမသွားနိုင်ခြင်း၊ ဆီးသွားပုံ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဆီးတွင် သွေးပါခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန် တက်ခြင်း
အလွန်ဆိုးရွားသော အရိုး၊ အဆစ် သို့မဟုတ် ကြွက်သား နာကျင်ခြင်း
ပုံမှန်မဟုတ်သော တင်ပဆုံ သို့မဟုတ် ပေါင် နာကျင်ခြင်း
နှလုံးခုန်သံ မြန်ခြင်း သို့မဟုတ် နှေးခြင်း
မျက်လုံး အမြင် ပြောင်းလဲခြင်း၊ မျက်လုံး နာခြင်း၊ အလွန်ဆိုးရွားသော မျက်လုံးရောင်ခြင်း
မျိုချသောအခါ အလွန်ဆိုးရွားသော နာကျင်ခြင်း
ရှင်းမပြနိုင်သော အညိုမဲ စွဲခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်း
အလွန် မောပန်းခြင်း၊ အားနည်းခြင်း
ဆေးထိုးသော နေရာတွင် နာကျင်ခြင်း
ဆေးထိုးသော နေရာတွင် နီရဲခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း
အစာအိမ် အောင့်ခြင်း၊ ထိုးအန်ခြင်း
ဆေးထိုးသော နေရာတွင် ကျိန်းစပ်ခြင်း
ဝမ်းပျော့ခြင်း ( ဝမ်းလျှောခြင်း)
ကြွက်သား သို့မဟုတ် အဆစ် နာကျင်ခြင်း
ခန္ဓါကိုယ် တစ်ခြမ်းတွင် အားနည်းခြင်း၊ စကားပြောရာ သို့မဟုတ် တွေးခေါ်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း၊ မျှခြေ ပြောင်းလဲခြင်း၊ မျက်နှာ တစ်ခြမ်းတွင် သွားရည်ကျခြင်း၊ အမြင် ဝေဝါခြင်း
ဤဆေးသည် မေးရိုး ပြဿနာများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေသည် ဤဆေးကို ကြာကြာသောက်လေ ပိုမြင့်လေ ဖြစ်သည်။ သင့်တွင် ကင်ဆာ၊ သွား ပြဿနာများ၊ ကောင်းစွာ မကိုက်ညီသော အံကပ်၊ သွေးခဲမှု ပြဿနာများ သို့မဟုတ် ရောဂါပိုး ကူးစက်မှု ရှိပါက ဖြစ်နိုင်ချေသည် ပိုမြင့်သည်။ သင်သည် သွား ကုသမှု ခံယူထားပါက၊ ဓါတု သို့မဟုတ် ဓါတ်ရောင်ခြည် ကုထုံး ခံယူထားပါက၊ မေးရိုး ပြဿနာများ ဖြစ်နိုင်သော အခြားဆေးများ ဥပမာ အချို့ စတီးရွိုက် ဆေးများ သောက်နေပါက ဖြစ်နိုင်ချေသည် ပိုမြင့်သည်။ ၎င်းကို ဖြစ်စေသော ဆေးများစွာ ရှိသည်။ သင်သည် မသေချာပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးပညာရှင်အား မေးပါ။ သင်သည် မေးရိုး ရောင်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်အား ချက်ချင်းခေါ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Zoledronic Acid (ဇိုလီဒိုနစ် အက်စစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Zoledronic Acid သည် သင်လက်ရှိသောက်နေသော အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဆေး တုံ့ပြန်မှုများ ကို ရှောင်ရန် သင်အသုံးပြုနေသော ဆေးများ အားလုံးကို စာရင်းပြုပြီး ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်အား ပြပါ။ ဘေးကင်း စေရန် ဆရာဝန် သဘောတူမှုမပါဘဲ ဆေးပမာဏ ကို ပြောင်းခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ စတင်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Zoledronic Acid (ဇိုလီဒိုနစ် အက်စစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Zoledronic Acid သည် အစာ သို့မဟုတ် အရက် နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေ သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆေးမသောက်မီ အစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓါတ်ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သလားကို ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Zoledronic Acid (ဇိုလီဒိုနစ် အက်စစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Zoledronic Acid သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေများနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုသက်ရောက်မှုသည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းသွားခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင် သည်။ သင့်တွင် လက်ရှိ ရှိနေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်အား အသိပေးထား ရန် အရေးကြီးသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Zoledronic Acid (ဇိုလီဒိုနစ် အက်စစ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Multiple Myeloma ကြောင့် အရိုးပျက်စီးမှု အတွက် ပုံမှန် လူကြီး ပမာဏ
Zometa(R) :4mg IV 15 မိနစ်ထက် မပိုစေရ။ 3-4 ပတ် တစ်ခါ ပေးပါ။
အကျိတ်ခဲ၏ အရိုးသို့ ပျံ့နှံ့မှု အတွက် ပုံမှန် လူကြီးပမာဏ
ကင်ဆာကြောင့် သွေးတွင်း ကယ်စီယမ် များမှုအတွက် ပုံမှန်လူကြီး ပမာဏ
Zometa(R) : အများဆုံး ပမာဏ။ တစ်ခါထိုး4mg IV infusion 15 မိနစ်ထက် မပိုစေရ။
Paget’s Disease အတွက် ပုံမှန်လူကြီးပမာဏ
Reclast (R) :5mg IV infusion, ပုံသေ ထိုးသွင်းသော နှုန်း ဖြင့်ပေးပါ။ 15 မိနစ်ထက် မပိုစေရ။
ကယ်စီယမ်နှင့် ဗီတာမင် ဒီ ဖြည့်စွက်စာ
ကယ်စီယမ်။ 750 mg ကယ်စီယမ် ဒြပ်စင်ကို တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် သောက်ပါ။ သို့မဟုတ် 500 mg ကို တစ်နေ့ သုံးကြိမ် သောက်ပါ။
ဗီတာမင် ဒီ။ 800 international units ကို နေ့စဉ် သောက်ပါ။ အထူးသဖြင့် ဆေးပေးပြီးနောက် ၂ ပတ်တွင်သောက်ပါ။
အရိုးပွခြင်းအတွက် ပုံမှန်လူကြီး ပမာဏ
Reclast (R) :5mg IV infusion 15 မိနစ်ထက် မပိုစေရ။ တစ်နှစ် တစ်ခါပေးပါ။
အရိုးပွခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ပုံမှန်လူကြီး ပမာဏ
Reclast (R) :5mg IV infusion 15 မိနစ်ထက် မပိုစေရ။2နှစ် တစ်ခါပေးပါ။
ကလေးတွေအတွက် Zoledronic Acid (ဇိုလီဒိုနစ် အက်စစ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Zoledronic Acid (ဇိုလီဒိုနစ် အက်စစ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Zoledronic Acid ကို အောက်ပါပုံစံ၊ ပြင်းအားများဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။
Zoledronic Acid ထိုးရန် မေ့သွားပါက တတ်နိုင် သလောက် မြန်မြန်ပြန် ထိုးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် ထိုးရန် အချိန်ရောက်သွားပါက မေ့သွားသော အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်ထိုးပါ။ နှစ်ကြိမ် ထပ်မထိုးပါနှင့်။
Zoledronic Acid.https://www.drugs.com/cdi/zoledronic-acid-bone-health.html. Accessed November 20, 2017
Zoledronic Acid.https://www.webmd.com/drugs/2/drug-21754/zoledronic-acid-intravenous/details. Accessed November 20, 2017